11 ก.ย. 2562 - 23:07 น.
တပ်မတော် ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းအောင်ပြောဆိုမှု နဲ့ မြဝတီမင်းကြီးကျောင်းတိုက်ဆရာတော် ကို အရေးယူပေး ဖို့ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်တရားရုံးမှာတပ်မတော်က ဦးတိုက်လျောက်တိုင်တန်းထားပါတယ်။
တိုင်ကြားထားသူဟာ အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်က ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး သော်တာထွေးဖြစ်ပြီးတော့ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်ရဲစခန်းမှူးက ဆရာတော်ကို မနေ့က လာရောက်အကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့ မြဝတီမင်းကြီးကျောင်းတိုက်ဆရာတော် ဦးအရိယာဝံသာဘိဝံသက ဘီဘီစီကိုမိန့်ပါတယ်။
တပ်မတော်က အခုလို မြဝတီမင်းကြီးကျောင်းတိုက်ဆရာတော် ကို တရားစွဲတာ ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဆရာတော် တွေထဲမှာ သုံးပါးမြောက်ဖြစ်ပြီးတော့ ၅၀၅ (ခ)နဲ့ အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။
တပ်မတော်က တရားစွဲဆိုမှုတွေဟာ နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှု ၅၀၅ (ခ) နဲ့စွဲလေ့ရှိပြီးတော့ တရားရုံးက အမှုကိုပလပ်ရင် ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေ ၆၆ ဃ နဲ့ ပြောင်းစွဲလေ့ရှိတယ် လို့တပ်မတော်ရဲ့ အမှုဖွင့်အရေးယူမှုတွေကို ကန့်ကွက် နေတဲ့ blue shirt campaign လှုပ်ရှားသူ အသံအဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်ဒါရိုက်တာ မောင်ဆောင်းခ က ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ငွေလှူတာကို သာသနာရေးက သွယ်ဝိုက်ဝေဖန်
မဘသ အမည်ပြောင်း ဗုဒ္ဓဓမ္မ ပရဟိတဖောင်ဒေးရှင်းကို တပ်မတော်က အလှူငွေသိန်း ၃၀၀ လှူဒါန်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြဝတီမင်းကြီး ဆရာတော်နှင့် ဆရာတော် ဦးသောဘိတ (အလင်္ကာကြယ်)တို့က ဝေဖန်ဆိုပြောဆိုခဲ့တာရှိပါတယ်။
"သူတို့က ကယောင်ခြောက်ခြားဖြစ်ပြီးတော့ ခံနိုင်ရည် မရှိတော့ဘူးထင်တာပါပဲလို့လည်း" လို့လည်း မြဝတီမင်းကြီး ဆရာတော် ကဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
"ဘုန်းကြီး ကစပြောကတည်းက ပြောရဲလို့ ပြောတာ ၊ရင်ဆိုင်ရဲလို့ ပြောတာ၊ဖြေရှင်းရဲလို့ ပြောတာလေ ဒီတော့ရင်ဆိုင်ဖို့ဘဲရှိပါတယ်"လို့ သူကပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ ၅ရက်နေ့ကလည်း ရွှေဝါရောင်ဆရာတော် ဦးစိန္တိတကို ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) နဲ့ အရေးယူပေးဖို့ ယခင်အမှုကိုတိုင်တန်းခဲ့သူ တပ်မတော် က ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး သန့်ဇင်ဦးက တရားလိုလုပ်ပြီး ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့မရဲစခန်းမှာ ထပ်မံတိုင်တန်းထားတယ်လို့ လည်းသိရပါတယ်။
ဒါဟာနိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှု ၅၀၅ (ခ) နဲ့စွဲလေ့ပြီး တရားရုံးက အမှုကိုပလပ်လို့ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေ ၆၆ ဃ နဲ့ ပြောင်းစွဲတာဖြစ်ပါတယ်။
မဘသ အမည်ပြောင်း အဖွဲ့ ကိုရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်က ကျပ်ငွေ သိန်း၃၀၀ လှူဒါန်း တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့စွဲ နဲ့ သာသနာရေးက ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြီး သွယ်ဝိုက်ဝေဖန် ခဲ့ပါတယ် ။
အဲဒီထဲမှာ ဗုဒ္ဓဓမ္မပရဟိတဖောင်ဒေးရှင်းဟာ နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ က တရားမဝင်ဟု သတ်မှတ်ထားတဲ့ အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ဒီ အဖွဲ့ကို အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုကငွေကျပ်သိန်း ၃၀၀ လှူဒါန်းခဲ့ခြင်းဟာ နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဆန့်ကျင်ရာရောက်သော လုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အများပြည်သူက ရှုမြင်ကြပါသည် လို့လည်းရေးသားပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဗုဒ္ဓဓမ္မပရဟိတဖောင်ဒေးရှင်းကို ကျပ်ငွေ သိန်း၃၀၀ လှူဒါန်းတာနဲ့ပက်သက်လို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြန်ပြီးရှင်းထားပါတယ် ။
မဘသ အဖွဲ့အမည်ပြောင်း ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ပရဟိတ ဖောင်ဒေး ရှင်(ဗဟို)ကို ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့ကျင်းပတဲ့ နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံမှာ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်က ငွေလှူဒါန်းခဲ့တာဟာ သံဃာကိုရည်မှန်းပြီး လှူတာဖြစ်တယ်လို့ တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကော်မတီ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ တပ်မတော်ဘက်က ပြန်လည် ရှင်းလင်းပါတယ်။
တပ်မတော် ကအခုရက်ပိုင်းတရားစွဲ ဆိုမှုတွေ ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလ နောက်ပိုင်းကစလို့ရပ်သွားတာမျိုးမရှိဘဲ ဆက်တိုက် ဖြစ်လာတာတွေရတယ်လို့ Blue Shirt Campaign ကို အသံအဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်ဒါရိုက်တာ မောင်ဆောင်းခ က ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
တပ်မတော်က တရားစွဲမှုတွေဟာ လွှတ်တော်ထဲမှာ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင် ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အစိုးရ အရှိန်မြုင့်လာချိန် မှာ တပ်မတော်ရဲ့ အမှုဖွင့်အရေးယူမှုတွေကပိုစိပ်လာတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။
"အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်တော့ ၁၅ မှုလောက်ရှိတယ် လို့ ပြောလို့ရတယ် ဒီအထဲမှာ ဆရာတော် တစ်ပါးထပ်တိုးတော့ဆရာတော် ၃ပါးအစွဲ ခံနေ ရတာယ် လို့ပြောလို့ရတယ် "လည်းမောင်ဆောင်းခ ကပြောပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ၅၀၅ ခ နဲ့ဆွဲတဲ့အမှုတွေ ကို တော့ တရားရုံးကပလပ်လေ့ရှိပြီးတော့ ၅၀၅ က နဲ့ဆွဲတာဆိုရင်တော့ တပ်နဲ့ဆိုင်တယ် ဆို ပြီးဒါရိုက်တာ မင်းထင်ကိုကို ကြီးကို တရားရုံးကထောင်ဒဏ် တစ်နှစ်ချမှတ်လိုက်တာရှိပါတယ်။
အခု မန္တလေးမြဝတီကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ကို တပ်မတော် က စွဲဆိုတဲ့ အမှုဟာလည်း အရင် အမှုတွေလို တရားရုံးကပလပ် လေ့ရှိပြီးတော့ အဲဒီလို ပလပ်ရင် လည်းတပ်မတော် က နောက်တစ်မှုနဲ့ပြောင်းစွဲ ဖို့ရှိလာနိုင်တယ်လို့လည်း မောင်ဆောင်းခကပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ မဘသကို ငွေလှူတာဝေဖန်လို့တပ်ကတရားစွဲ